Ihe niile ịchọrọ ịma banyere ugwu mgbawa | Netwọk Mgbasa Ozi
Volcanoes nwere ikike ịhapụ ọtụtụ ike ma bibie ihe niile gbara ya gburugburu. Ha bụ ihe kpatara nguzobe na ala. Ọrụ ya anaghị adị mgbe niile, mana mgbe ugwu na-arụ ọrụ ọ nwere ike ibute nsogbu na ihe egwu gburugburu ebe obibi.
You chọrọ ịma ihe niile gbasara ugwu ọkụ?
1 Ofdị na-agbawa agbawa
1.1 Ihe mgbawa nke Hawaii
1.2 Ngbawa Strombolian
1.3 Ihe mgbawa nke Vulcan
1.4 Ogbunigwe Plinian
1.5 Surtseyan gbawara
1.6 Mmiri Hydrovolcanic
2 Kedu ka ugwu ọkụ si arụ ọrụ?
Ofdị ntiwapụ nwere ike ịdabere na ọdịdị na oke nke ugwu mgbawa, yana usoro nke gas, liquids (lava), na solids na-apụ. Ihe ndị a bụ ụdị nrịanrịa ndị dị na njirimara ha:
Ha bụ njirimara mmiri magmas nke ihe mejupụtara (ọkachasị ha bụ basaltic), nke a na-ahụkarị n'ụfọdụ agwaetiti mmiri bụ agwaetiti Hawaii, Olee ebe aha gi si bia.
Ha bụ ntiwapụ nke na-ebupụta lavas na mmiri na ogbenye gas, yabụ, ha anaghị agbawa agbawa. Ugwu mgbawa a na-enwekarị mkpọda ndị dị nro ma nwee ọta. Ọnụ ọgụgụ nke ịrị elu magma na-adị ngwa ngwa ma na-ebili ọsọ ọsọ.
Ihe ize ndụ nke ụdị ọkụ ọkụ a bụ na ọ na-asacha enwe ike ịga njem ọtụtụ kilomita ha na-ebute oku na mbibi nke akụrụngwa ọ na-ezute.
Magma, nke na-abụkarị basaltic na mmiri mmiri, na-ebili nwayọ ma jikọta ya na nnukwu gas na-ebili ruo mita 10 n'ịdị elu. Ha nwere ike iwepụta oge mgbawa oge.
Ha anaghị ebunye ogidi ebufe na pyroclasts, nke na-akọwa ụzọ ballistic, na-ekesa na gburugburu kilomita ole na ole gburugburu ụzọ. Ha anaghị eme ihe ike mgbe niile ka ihe egwu ha dị ala ma ha nwere ike ịmị cones. A hụrụ mgbawa ndị a na ugwu mgbawa na agwaetiti Aeolian (Italy) na Vestmannaeyjar (Iceland).
Ihe ndị a bụ mgbawa mgbawa na-agbawa agbawa site na-emeghechi ugwu mgbawa na-egbochi lava. Ihe mgbawa ahụ na-eme n'oge etiti nkeji ole na ole ruo awa. Ha bụ ndị a na-ahụkarị na ugwu mgbawa na-ewepụta magma nke mejupụtara etiti.
Ogidi ndị ahụ akarịghị kilomita iri n'ịdị elu. Ha bụ mkpụmkpụ dị egwu.
Ha bụ ntiwapụ jupụtara na gas nke, mgbe etinyere na magma, na-akpata nkụwa ya na pyroclasts (pumice na ash). Ngwakọta ngwaahịa a na-apụta site na ọnụ nwere ọnụego dị elu nke ịrịgo.
A na-emepụtasị ihe ndị a n'ụzọ zuru ezu, ma na ụda na ọsọ. Ha gụnyere magis magis-viscosity dị elu. Ọmụmaatụ mgbawa nke Vesuvius nke mere na 79 BC. C.
Ha na-eweta nnukwu ihe egwu, ebe ọ bụ na ogidi ndị na-agbapụta agbapụta bụ nke ero ma rute ogologo (ma rute na oke ala) ma na-ebute oke mmiri ozuzo ntụ nke na-emetụta oke ọrụ dị elu (ọtụtụ puku kilomita kilomita).
Ha bụ mgbawa mgbawa nke magma na-ejikọta na oke mmiri. Ihe mgbawa ndị a na - eweta agwaetiti ọhụrụ dịka mgbawa nke ugwu Surtsey, na ndịda Iceland, qnke nyere agwaetiti ọhụrụ na 1963.
A na-ahụ ọrụ nke ihe ndị a site na ntiwapụ kpọmkwem nke nnukwu igwe ojii na-acha ọcha vepo na-emepụta agwakọta ya na ojii ojii nke basaltic pyroclasts.
Na mgbakwunye na mgbapụta Vulcanian na Plinian nke akpọrọ aha ya, nke a na-etinye aka na mmiri, e nwere ndị ọzọ nwere ụdị phreatic (nke ahụ bụ, ha nwere obere onyinye nke ihe na-eme ihe) nke ịrị elu nke magma.
Ha bụ mgbawa uzuoku emepụta na nkume nke dị n'elu isi iyi magma nke na-ebute nsonaazụ na-agbawa obi site na deflagration na apịtị apịtị.
Kedu ka ugwu ọkụ si arụ ọrụ?
Anyị ekwuola banyere ụdị ihe ike na-adị, mana anyị amaghị etu ugwu ọkụ si arụ ọrụ. Iji ghọta ya n'ụzọ dị mfe, a ga-eji ihe atụ dị mfe kọwaa ya.
Na igwe na-esi mmiri ọkụ nke na-esi mmiri, uzuoku na-agbanye mgbidi dị n'ime ya site na mmụba nke olu. Ka okpomọkụ dị n'ime ite ahụ na-abawanye, olu uzuoku na-ewe ohere karịa ma na-emekwu nrụgide, ruo mgbe oge ga-abịa mgbe a tọhapụrụ ya site na valvụ na uzuoku na-esi n'ite ahụ na-eme mkpọtụ.
Ihe na-eme na ugwu mgbawa bụ ihe yiri ya. Okpomọkụ na-abawanye n'ime, ruo mgbe a ga-achụpụ ihe ndị dị n'ime ya na alụlụ mmiri n'èzí. Na-ekpo ọkụ n'ime ime, ka ihe ike na-agbawa ga-agbawa.
Volcanoes gafere ụzọ atọ:
Ọgbawa mgbawa. Okpomoku nke ihe pyroclastic na-aputa na mputa. Dika achoputara mgbawa n'ime ala, o na-agbaji ha n'ike na ntiwapụ nke gas na ihe di iche iche nwere ike ime. A na-akpọ ihe ndị a nke siwasị anwansị nke magma, ntụ ma ọ bụ mpekere. N’ọtụtụ oge, ụfọdụ ọrụ mgbawa ugwu na-esokarị ugwu mgbawa na-esokarị.
Oge mmebi. Nkume ndị a wụrụ awụ na-esi na mkpọda ugwu mgbawa na-apụta. Lava na-adịkarị na okpomọkụ n'etiti 1000 na 1100 degrees. Mgbe ahụ, ọ ga-eji nwayọọ nwayọọ na-ajụ oyi ma sie ike ruo mgbe ọ ga-enweta ọdịdị ọdịdị nke nkume.
Oge Emanation. Ozugbo ihe niile siri ike gwụchara, a na-ahapụ steam na gas.
Ugwu ugwu nwere isi ato:
Maticlọ magma. A chọtara ya n’ime ime ala ụwa ma ọ bụ ebe lava na-agbakọta.
Ekwú ọkụ. Ọ bụ ụzọ a na-esi achụpụ lava na gas.
Ndagwurugwu. Ọ bụ oghere dị n’elu akụkụ anwụrụ anwụ nke akpọrọ dị ka foneelu.
Ọrụ nke ugwu mgbawa siri ike ịkọ ebe ọ bụ na ha dịgasị iche iche ma dabere n'ọtụtụ ihe mgbagwoju anya iji tụọ. Ha na-anọkarị oge nke ha anaghị arụ ọrụ ọfụma na oge ndị ọzọ ha na-arụ ọrụ agafeghị oke. Ndị kasị njọ bụ ndị na-anọdụ ala nkịtị kemgbe ọtụtụ narị afọ wee pụta na ntiwapụ na-agbawa agbawa.
N’akụkọ ihe mere eme niile, anyị nwere ike ịhụ etu ugwu ugwu si mebie obodo dị iche iche kpamkpam, lee Pompeii na Herculaneum na Rom oge ochie.
Site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ugwu mgbawa na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ugwu ọkụ